Manao ny zavatra rehetra amin’ny anaran’i Jesôsy
"Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesôsy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra Ray amin'ny alalany." - Kol. 3:17.
Takin'ny Tompo ny hanaovan'ny olombelona mpanompony rehetra izay tsara indrindra; ka izay manao izany dia hahazo ny fahafaham-po manokana izay lehibe indrindra. Tsy vitan'izay fa hitondra fahafaham-po lehibe indrindra ho an'ireo izay liana aminy koa izy ireo. Ilain'ny tanora ny mahatsapa fa mila fanandramana lalina mikasika ny zavatra momba an'Andriamanitra izy ireo. Tsy hitondra soa ho azy ny ezaka ivelambelany fotsiny. Mila mitondra ny fahazavan'ny Tenin'Andriamanitra ao am-ponao ianao mba hahazoanao mizaha izany amin'ny jiro mirehitra (...)
Mety ho tonga fitahiana sy fanampiana eo aminareo samy ianareo ihany ianareo rehefa miara-miasa ka mifanome hery miasa mangina avy any an-danitra. Ao anefa ireo izay manana fahalemen-toetra lehibe tokoa izay efa nangeja azy lalindalina kokoa ka raha tsy resen'izy ireo izany dia hanaisotra ny Fanahin'Andriamanitra tsy ho ao am-pony (...) Ny fivavahan'ny Baiboly dia tsy hoe hery eo anivon'ny maro hafa. Lehibe indrindra ny heriny sady manenika sy mifehy ny hafa rehetra. Natao hifehy ny fiainana sy ny fitondran-tera mihitsy ny fivavahan'ny Baiboly. Tsy tokony ho tahaka ny loko mifafy etsy sy eroa eo amin'ny lamba fanao hoso-doko izany. Ny heriny dia natao hanenika ny fiainana iray manontolo toy ny hoe natsoboka tao anatin'ny loko mihitsy izany lamba izany mandra-pahatongan'ny kofehy tsirairay ho vonton'ny loko izay tsy hatsatso na oviana na oviana. Homen'ny Tompo anao ny fahatakarana ireo fahamarinana ara-Baiboly rehetra rehefa ampiharinao eo amin'ny fiainanao izany. Ny fitsipiky ny fahamarinana dia natao hampiharina eo amin'ireo fanandramana rehetra amin'ny lafim-piainana rehetra. — YI, 30 May 1895.
Na dia eo amin'ireo adidy madinidinika kokoa eo amin'ny fiainana andavanandro aza, dia tokony hitombo mandrakariva amin'ny fahasoavana isika, miaraka amin'ny fikasana ambony sy masina ary lehibe, satria avy tamin'Ilay nanolotra ny ainy izany mba hampirisika antsika hahomby tanteraka eo amin'ny fananana toetra kristianina. — CT, 490.
Na aiza na aiza iasan'ny fivavahan'i Kristy, dia hampahazava sy hahamamy ny tsipiriany rehetra amin'ny fiainana izany, miaraka amin'ny fifaliana mihoatra lavitra noho ny fifalian'ny tany ary fiadanana ambony lavitra noho ny fiadanana eto an-tany. Lt 2a, 1892.